‘जनतालाई ज्यानको पिर‚ नेतालाई कुर्सीको’ – नेपाली संगसार
‘जनतालाई ज्यानको पिर‚ नेतालाई कुर्सीको’
नेपाली संगसार calendar_today ७ जेष्ठ २०७८, 1:32 am
हेटौंडा । बिहीबार हेटौंडामा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन भइरहँदा स्थानीय ६० वर्षीय रामदेव महतो भरै के खाने भन्ने पिरमा थिए। निर्वाचन केन्द्रबाट करिब ५० मिटरको दूरीमा रहेको घरबाहिर भुइँमा टुसुक्क बसेर सोचिरहेका थिए।
बारा घर भएका उनी लामो समयदेखि हेटौंडालाई कर्मथलो बनाएर बसिरहेका छन्। निर्माण क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका उनलाई अहिले आफू एक्लैको ज्यान पनि कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न स्थानीय प्रशासनले दुई साताअघि देखि निषेधाज्ञा लगाएको छ। जसकारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने उनी भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
रामदेवलाई आफू बसेको छेवैमा उपनिर्वाचन भइरहेको थाहा थियो। तर, उनी त्यहाँसम्म रमिता हेर्ने गएनन्। चुनावका लागि आएका नेताले पेट भर्न केही नदिने भएकाले आफू त्यहाँ नगएको उनले बताए।
‘चुनाव भइरहेको छ रे भनेको त सुनेको हो। गाडी पनि आको आई छ,’ उनले भने, ‘तर कसैले हामीलाई खानेकुरा ल्याएर दिएका छैनन्।’ यति बोलिसक्दा उनको आँखा रसाइसकेको थियो।
रामदेवजस्तै शिवराम कार्कीलाई पनि बिहान बेलुका के खाउँ भन्ने पिर छ। तर, चुनावका लागि आएका गाडी लस्करै उनको घरअघि गुडिरहेका छन्। तर, शिवरामलाई त्यो पटक्कै मन परेका छैन।
‘हामी चाहिँ एकछिन आफ्नो घरको आँगनमा निस्किँदा पनि गाली गरेर भित्र पठाउँछन्,’ उनले आक्रोस पोखे, ‘उनीहरुले जे गरे पनि हुने? नेतालाई रोग लाग्दैन? नेतालाई नियम लाग्दैन? हामी दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरु रोग लाग्छ भनेर नियम मानेर एउटा कोठाको कुनामा बसिरहँदा नेताहरुको यस्तो रमाइलो?’
कार्की रगतमा इन्फेक्सन भएपछि दुई वर्षदेखि घरमै बसिरहेका छन्। घरमा पनि के भन्नु भाडाको घरमा बसिरहेका छन्। बिरामी भएर आफूले काम गर्न नसक्ने भएपछि श्रीमतीको कमाइ र औषधिले बाँचिरहेको उनले बताए। तर, अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा थारै भए पनि आउने गरेको आयश्रोतको बाटो रोकिएको उनले बताए।
‘कमसेकम रोग र भोक त नेता र जनता दुवैलाई लाग्नु पर्ने हो नि,’ उनले भने, ‘तर नेतालाई त रोग नलाग्ने रैछ, अनि जनतालाई भोक नलाग्ने?’
उपनिर्वाचनको केन्द्ररबाट एक मिनेटको दूरीमा रहेका विष्णु ढकाललाई उपनिर्वाचनबारे कुनै चासो छैन। ‘आफ्नो मानो खानु परेको छ, भएको एउटा पसलको सटर बन्द गर्नु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘को नेता आएर के गर्ने हुन् र चासो दिनु?’
महिना मरेपछि पसल नखोले पनि भाडा तिर्नुपर्ने बताउँदै विष्णुले जो सुकै नेताले चुनाव जितेर वा हारेर केही नहुने बताए। उनले रोगको त्रास देखाउँदै जनतालाई घरमा बन्द गरेर नेता भने भेला, जमघट र चुनाव गर्दै हिँडेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘जनतालाई कसरी बाँच्ने भन्ने पिर छ, नेतालाई भने कुर्सीकै पिर छ।’